Umgangatho, intloko yeAngle ePhambili, umatshini wokujonga ubuso, ii-axis ezine, i-CNC yokwenza i-gong processing, i-Gantry milling, abavelisi, eyenziwe e-China-Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co. LTD.
Intambo yokugaya ethe tye
I-TUOYUAN enikezela ngesantya esiphezulu- iziqwenga ezingama-200 ngomzuzu umatshini wokulinganisa umatshini ozenzekelayo uquka iseti enye yomatshini wokukrola umatshini kunye neseti enye yomatshini we-earloop welding, inokugqiba inkqubo yokondla impahla eluhlaza, ukusonga, ukuyila, ukusika, i-earloop welding , ubuso bokukhutshwa kwemaski. Isincedisi sisantya esiphezulu kwaye sizinzile. Silindele ukuba ngumboneleli wethu ogqwesileyo womatshini wemaski owenziwe e-China.
Funda ngokugqithisileyo Thumela ubuzo More
Intloko yokugaya ye-Gantry
CNC machining iziko intloko yokugaya kwicala
Intloko ye-angular jikelele
Intloko ye-Angle degree
TUOYUAN uzibeke njengeziko phezulu iindawo CNC oomatshini ezenziwe China. TUOYUAN ukubonelela zero isiphene iindawo machining CNC ngokusebenzisa inkqubo yesiphelo ukuhlolwa uhlolo. Imveliso yethu ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha ngokubhekisele kwiimfuno zabathengi bethu. Silindele ukuba sibe ngumthengisi wakho oomatshini obalaseleyo owenziwe China.